“Wuu qarwaayay” – Ruud Gullit oo cagta mariyay Virgil van Dijk – Gool FM
(Yurub) 19 Feb 2020. Daafaca caalamiga ah qaranka Holland ee Virgil van Dijk ayaa dhaleeceen badan loo soo jeedinayaa doorkiisa Liverpool ee kulanka lugta hore wareega 16-ka UEFA Champions League, kaddib markii ay guul darro 1-0 ah kala kulmeen kooxda reer Spain ee Atletico Madrid.
Van Dijk ayaa ku guul darreystay in uu hakiyo Saul Niguez kaas oo ka faa’ideystay daqiiqadii 4-aad ee ciyaarta kaddib gees ka laad uu soo qaaday ciyaaryahan Koke.
Ruud Gullit oo ah falanqeeye la tirsan “beIN Sports” ayaa dhaleecen u jeediyay Virgil van Dijk kaas oo lagu tiriyo in uu yahay daafacyada ugu wanaagsan ee kubada cagta ka xamaasha, xilli uu tilmaamay in van Dijk uu xalayto qarwayay.
Ruud Gullit ayaa inta uu ku gudi jiray falaqeyntiisa kulankii xalay waxaa hadaladiisa ka mid ahaa:
“Van Dijk xalayto waa uu qarwayay, wxaan arkayay waxa uu sameyay xalay, gaar ahaan kubaddii koowad ee koornada, xoogaa isku xirka waa uu yaraa, muhiim ma ahan in taas la sameeyo”.
Ruud Gullit ayaa sidoo kale saadaliyay haddii Liverpool ay fursad u heysto in ay soo laabasho ku sameyn karto garoonkeeda Anfield waxa uuna yiri.
“Way garanayaan Anfield, waxay ku dhaliyaan goolal faro badan, laakiin waxay wajahayaan ciyaar sida tan oo kale ah”.
“Waxay u baahan yihiin in ay ka fiicnaadaan sida kulankan oo kale, kana faa’ideystaan waqtigooda, si dhaqsi ahna ay u ciyaaran iyo wax walba”.